Ihe edemede Jascha Kaykas-Wolff na Martech Zone |
Edemede site na Jascha Kaykas-Wolff
Jascha Kaykas-Wolff kwenyere n'ụkpụrụ abụọ bụ isi: Chọta ohere ebe ọ na-adịghị onye ọzọ na-achọ; Na, ghara ida otu ụzọ ugboro abụọ. Ọ bụ usoro a gbadoro ụkwụ na omume ịre ahịa Agile. Ejikọtara ya na BA na Psychology na Whittier College, ọ bụ nke na-ejere ya ozi nke ọma na n'onwe ya. Dị ka onye na-ere ahịa ogologo oge na onye ndụmọdụ na ahụmịhe njikwa na Yahoo !, Microsoft, Webtrends, Involver (nke Oracle nwetara) na Mindjet, ọ na - eduzi ahịa na BitTorrent.
Tọzdee, Septemba 18, 2014 Sunday, October 4, 2015 Jascha Kaykas-Wolff
Site na owuwu ulo rue ngwe ngwanrọ. N'afọ ndị 1950 ka etinyere Model Water Development Model n'ime nghazi na mmepe sọftụwia. Usoro a bu ihe omuma nke ulo oru mmeputa ihe ebe, site na nkpa, ekwesiri ighota azịza kwesiri tupu oru amalite. Na, na ụwa, azịza ziri ezi ezi uche! You nwere ike iche n'echiche nke ebe ị kpebiri iwu ụlọ elu elu ụzọ dị iche iche site na ụzọ ahụ? Nke ahụ kwuru, ọ bụ ihe mepụtara nke
Mepụta Marketingtù Azụmaahịa Kachasị Mma.
Fraịdee, Nọvemba 15, 2013 Fraịdee, Nọvemba 15, 2013 Jascha Kaykas-Wolff
Na mkparịta ụka mụ na enyi m na onye ọrụ ibe m bụ Joe Chernov, VP Marketing na Kinvey anyị na-agbanwe ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a jụrụ anyị abụọ natara n'ime ndị otu anyị na site n'aka ndị ọgbọ na ụlọ ọrụ ahụ. Site na Joe ịbụ onye na-ere afọ ojuju n'afọ, ọ gaghị eju gị anya ịmara na otu n'ime ajụjụ ya ndị kachasị ajụ bụ: Kedụ ka m ga-esi malite mmemme azụmaahịa na-aga nke ọma? Ajụjụ nke abụọ ọ na-ajụkarị bụ: